Ka Subaga Buruurta: Ka dheeroow intaad awoodo cunto Isku day inaad yarayso cuntada subaga markastood cunto soo inta subag ku jirta, caanaha laga miirayna cab inaad,. Daawada afka laga ee steroids wuxuu keena waxyeelayn sidaas awgeed waxaa la keliya markii ay kale la tijaabiyay. Dawaada afka laga ee steroids wuxuu keena waxyeelayn sidaas awgeed waxaa la keliya markii ay daawaynada kale la tijaabiyay. Haddii lagu ag cabo sigaar, waxay halis ku jiraan neef. Ogow kugu neefta adigoo xasuusanaayo ay neefsashadaada sii xumaatey, ama isticmaalaayo qalabka cabbiraadka neef-baxsiga dheer markii aad cunto ama daawo oo aad u inuu kugu neefta.
Si aad u samaysid sidaan, waxaa lagaaga yahay inaad cuntid cunto caafimaad iyo inaad si joogto ah u samaysid jimicsi. Inkastoo oo halis keeni karo, haddii aad qabtid neef aad u xun, waa inaad qaadatid tallal sanadeedka ifilada (durayga). Waa inaad xitta qaadataa tallaalka ka hortagga pneumococcal - oo ah jeermis keena xanuunka sambabaha (pneumonia), meningitis iyo bukashada dhiigga.
Waxaa calaamadaha neefta bilaabi karo waxyaabo alarjiyo keeno (waxyaabaha keeno waxyeelayn alarjiyo ah) sida geedaha, cayayaanka yar-yar ee guriga, qiiqa sigaarka, qiiqa alaabta kiimikada, noocyo daawo sida asbiriinka, ama kuwa betablockers loo yaqaan. Kale ee wel'wel, kugu kicin neefta bukasho, noocyo gaar daryeel ah cunto, iyo xaalado gaar ah ee jawi, sida qaboow.
Next Next post: ﻿top 25 Photo Studio Manager Pages In Greater Nyc Area